By डा. मंगल रावल, हाडजोर्नी विशेषज्ञ
घुँडा गोडाको महत्वपूर्ण जोर्नी हो । उठबस र हिँडडुलमा घुँडाकै भूमिका ठूलो हुन्छ । घुँडाको जोर्नीमा समस्या भए शारीरिक गतिविधिमै अप्ठ्यारो निम्तिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण घुँडामा समस्या भए केही सजगता अपनाउन हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. मंगल रावलले सुझाव दिएका छन् ः
Last modified on 2018-12-03 00:52:42